အမျိုးသားအဆင့် VPA ပါ၀င်သူများ တည်ဆောက်ပုံများ | FLEGT
အမျိုးသားအဆင့် VPA ပါ၀င်သူများ တည်ဆောက်ပုံများ/
တစ်သီးပုဂ္ဂလအကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအားလုံးသည် ဆန္ဒအလျောက်မိတ်ဖက်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူညီချက် (VPA) လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးတွင် တိုက်ရိုက်မပါ၀င်နိုင်ပါ။ သို့ရာတွင် ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် အဖွဲ့များဖွဲ့၍ သူတို့၏ကိုယ်စားတက်ရောက်ရန် ကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ပါသည်။ ၎င်းအဖွဲ့များတွင် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များ၊ သမဂ္ဂများ၊ NGO ကွန်ယက်များနှင့် အရပ်ဖက် လူ့အဖွဲ့အစည်း ကိုယ်စားပြုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများထည့်သွင်းထားပါသည်။ VPA လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ၎င်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍများမှာ အောက်ပါတို့ပါ၀င်နိုင်ပါသည်။ ။
အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ ရပ်တည်ချက်များကို သဘောတူရန် နှင့် ၎င်း ရပ်တည်ချက် များကို အမျိုးသားအဆင့်နှင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပါ၀င်သော ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆို ရန်စသည့် VPA တစ်ခု၏ ရှုထောင့်များကို ဆွေးနွေးခြင်း။
အမျိုးသားအဆင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်း ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများအပါအ၀င် အလွှာစုံမှအကျိုး ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံများအတွက် ကိုယ်စားလှယ်များ ခန့်အပ်ခြင်း
VPA လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ၎င်း၏ ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုကို ကိုယ်စားပြု မဲဆန္ဒနယ်များအား အသိပေး ပြောကြားခြင်း
VPA အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကိုကူညီခြင်းနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို စောင့်ကြည့်စစ် ဆေးခြင်း။
VPA လုပ်ငန်းစဉ်အများစုများတွင် တရားဝင်နှင့် အလွတ်သဘောဖွဲ့စည်းထားသော အကျိုးဆက်စပ် ပတ်သက် သူများအဖွဲ့များသည် ယခင်ကတည်းက ရှိပြီးဖြစ်သည် သို့မဟုတ် ဆွေးနွေးပွဲများ မစတင်မီဖွဲ့ စည်းခဲ့ပါသည်။ ၎င်းအဖွဲ့များ၏ ထိရောက်မှုသည် ၎င်းအဖွဲ့၀င်များ၏ အမြင်များကို VPA အမျိုးသား အဆင့်နှင့် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ပါ၀င်သော VPA ဆွေးနွေးခြင်းများတွင် မည်မျှထိအသိပေးနိုင်သည် သို့မဟုတ် သိရှိစေနိုင်သည် နှင့် ဆွေးနွေးပွဲများမှ သတင်းအချက် အလက်များကို ၎င်းတို့၏ မဲဆန္ဒရှင်များ သို့ မည်မျှကောင်မွန်စွာစီးဆင်းစေနိုင် သနည်းဆိုသည့် အပေါ်တွင် တစ်စိတ်တစ်ဒေသအားဖြင့် မူတည်သည်။
ကိုယ်စားပြုခြင်းသည်လည်းစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့များကဲ့သို့ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ အဖွဲ့များတွင် စက်လွှဖြင့်သစ်ခုတ်သူ သို့မဟုတ် ပရိဘောဂဈေးကွက်စသည့် အသေးစား လုပ်ငန်းရှင်များထက် ကုမ္ပဏီအကြီးများသည် အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပါ၀င်တတ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် အသေးစား လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ ပါဝင်လာရန်မှာ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် စုစည်းမှုနှင့် VPA လုပ်ငန်းစဉ် အကြောင်း နားလည်မှုအတိုင်းအတာအပေါ်တွင် မူတည်သည်။
အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းအစီအစဉ်များအတွက်လည်း အဖွဲ့၀င်များ၏အမြင်များနှင့် ဦးစားပေးမှုများ များပြားမှုကို ဖော်ပြနိုင်ရန်မှာလည်း စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့၀င်များသည် လိင်၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ သဘာ၀ပတ်၀န်းကျင် သို့မဟုတ် ဆင်းရဲမွဲတေမှုစသည့် အရေးကိစ္စအမျာအပြားပေါ်တွင် အာရုံစိုက်နိုင်ပါ သည်။
ဥပမာ။ လိုင်ဘေးရီးယား စက်လွှနှင့် သစ်ကုန်သည်များသမဂ္ဂ
လိုင်ဘေးရီးယား စက်လွှနှင့်သစ်ကုန်သည်များသမဂ္ဂသည် လိုင်ဘေးရီးယန်းသစ်တောကဏ္ဍတွင် လက်မှု လုပ်ငန်းအတွက် စက်လွှအသုံးပြုသူများ နှင့် အသေးစားအကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ သမဂ္ဂသည် VPA ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများပြီးဆုံးသည့်အချိန် နှင့် EU နှင့် လိုင်ဘေးရီးယား တို့ VPA သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် VPA လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါ၀င်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ သမဂ္ဂသည်VPA လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အဖွဲ့၀င် ၂၀၀ ကျော်ကို သင်တန်းပေးခဲ့ပြီး VPA အကောင်အထည်ဖော်သည့်အဆင့်တွင် ၎င်း၏မဲဆန္ဒရှင်များကို ဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
ဇစ်မြစ် - FAO. 2014. The Voluntary Partnership Agreement (VPA) Process in Central and West Africa: From Theory to Practice. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, Italy. 58pp. [PDF ဒေါင်းလုဒ်ရန်]
ဥပမာ။ ။ FLEGT နှင့်ပတ်သက်သည့် ဗီယက်နမ် NGO ကွန်ယက်
FLEGT နှင့်ပတ်သက်သည့် ဗီယက်နမ် NGO ကွန်ယက်သည် အဖွဲ့ပေါင်း ၄၀ ကျော်မှ အဖွဲ့၀င်အဖြစ် ပါဝင်သည့် ကိုယ်စားပြုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဖွဲ့၀င်များတွင် တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုများ၊ အိမ်တွင်းနှင့်အခြားအသေးစားသစ်အချောထည်ထုတ်လုပ်သူများ၊ မြေပိုင်ဆိုင်ပြီး မြေယာ ခေါင်းစဉ်မရှိသူများအပါအ၀င် အတွေ့အကြုံနှင့် ဗဟုသုတရှိသောသစ်တောများအပေါ် မှီခိုနေထိုင်သည့် အဖွဲ့၀င်များပါဝင်ကြပါသည်။ စတင်တည်ထောင်သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး ကွန်ယက် သည် အောက်ပါ တို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
VPA လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပူးပေါင်းပါ၀င်ရန် ၎င်း၏အဖွဲ့၀င်များကို စွမ်းဆောင်ရည် တည်ဆောက် ပေးခဲ့ပါသည်။
တရား၀င်ဖြစ်ကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နှင့် တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံသည့်စနစ် ကဲ့သို့သော VPA ရှုထောင့်များနှင့်ပတ်သက်၍ ရပ်ရွာလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင် ခဲ့ပါသည်။
ဆွေးနွေးညှိနှိင်းခြင်းများအပေါ်အခြေခံပြီး စာဖြင့်ရေးသားထားသော မှတ်ချက်များကို ဗီယက်နမ် အစိုးရကိုပေးခဲ့ပါသည်။
သစ်တောကဏ္ဍတွင် ဥပဒေရေးရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် VPA၏ အသက်မွေး၀မ်းကျောင်း မှုအပေါ်ဖြစ်လာနိုင်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် သုတေသနပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အစီရင်ခံ စာများ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
ကွန်ယက်သည် ဗီယက်နမ်ဆွေးနွေးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွင် နေရာမရပါ။ သို့ရာတွင် ဗီယက်နမ် အစိုးရ သည် ဥပဒေစာရွက်စာတမ်းအသစ်များ၊ ကုန်သွယ်မှုသဘောတူညီချက်များ နှင့်ပတ်သက်၍ တိုင်ပင်ရန် ဥပဒေအရလိုအပ်သောကြောင့် နှင့် EU သည် ကွန်ယက်မှ ပြုလုပ်သည့် တင်ပြချက်အချို့ကို နောက်ထပ် အရေးယူဆောင်ရွက်သည့်အတွက်ကြောင့် ကွန်ယက်တွင် သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိပါသည်။ ကွန်ယက်သည် VPA အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း နှင့်၊ သို့မဟုတ် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းတွင် အခန်း ကဏ္ဍတစ်ရပ်ရှိလိမ့်မည်ဟု ကွန်ယက်ဥက္ကဌမှ မျှော်လင့်ပါသည်။
ဇစ်မြစ် - EU FLEGT Facility အင်တာဗျူး ၂၀၁၄
VPA အကောင်အထည်ဖော်နေသော နိုင်ငံရှိအကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ